र, यो पनि सर्वेन्द्र समय ! - Dainik Nepal
कस्तो रहला अब बा१झ ३६६६ को रफ्तार ?
विनोद ढकाल २०७५ वैशाख २ गते १२:५२
प्रहरी महानिरिक्षक (आइजीपी) सर्वेन्द्र खनाल
– विनोद ढकाल / दैनिक नेपाल
स्मरण छ– अघिल्लो वर्ष प्रहरी प्रमुखका लागि राजनीतिक, न्यायीक र व्यक्तिगत नियतले छताछुल्ल, छरपस्ट र विस्कुनझैं आएका हत्कण्डाहरूले उदेक नै बनायो । र, जनमत संग्रह गरौं जसले मत प्राप्त गर्छ उसैलाई प्रमुख बनाऔं भन्ने भावाशयमा कलम चलाउन परेको थियो । यस पटक यो नियती आएन । तर कलम चलाउने खुनखुनचाहीँ बाँकी नै रहेछ । विषयको थाक सानो छैन । सुल्टो पिरामिडबाट चल्ने सांगठनिक निकायका विषयमै केन्द्रीत हुने रहर जाग्यो ।
अब तस्बिर खिच्ने, फेसबुकमा पोस्ट्याउने, बुके र माला लगाउने क्रम न्युन हुन थालेको छ । यसको न्युनताले नै कर्तव्यको यात्रामा निरन्तर चल्न सकिन्छ । यो दौडसँग जुध्नेगरी कुद्नुपर्छ– बा१झ ३६६६!